Ukuphazamiseka Kweseli Ye-Ultrasonic - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "I-Ultrasonic Cell Disruption"
Ukuphazanyiswa kwamagciwane kuyindlela noma inqubo esetshenziselwa ukukhulula nokuhlukanisa ama-molecule eziphilayo ngaphakathi kweseli. I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo kakhulu yokuphazamisa nokuphazamisa izindonga zezingqimba namagundane ukuze impahla ye-intracellular kanye ne-biomolecules ehlosiwe ikhishwe kwi-solvent. Njengendlela engavamile, esezingeni eliphansi, elisebenzayo, ama-ultrasonic disruptors asetshenziselwa ubuchwephesha kanye nembonini ukuze kusetshenziswe amangqamuzana futhi akhiqize ama-extracts aphakeme. Ama-ultrasonic cell disruptors asetshenziselwa ukulungiselela i-DNA ne-RNA kanye nokukhipha ama-bioactive amakhemikhali afana namavithamini, ama-polyphenols noma ama-pigment yemvelo.
Funda kabanzi mayelana nezinhlelo eziningi ze-ultrasonic cell ukuphazanyiswa kanye nesitokisi!